Gerard Pique oo shaaca ka qaaday magacyada qaar ka mid ah xiddigaha Real Madrid uu si weyn u qadariyo – Gool FM
Gerard Pique oo shaaca ka qaaday magacyada qaar ka mid ah xiddigaha Real Madrid uu si weyn u qadariyo
Dajiye October 31, 2019
(Barcelona) 31 Okt 2019. Daafaca kooxda Barcelona ee Gerard Pique ayaa wuxuu ku adkeystay inuu si wanaagsan ula dhaqmo qaar ka mid ah ciyaartoyda ka tirsan naadiga Real Madrid.
Gerard Pique ayaa wuxuu xusay magacyada xiddigaha ku sugan kooxda Real Madrid uu si weyn u qadariyo, waxaana ka mid ah Nacho Fernández, Lucas Vázquez iyo Sergio Ramos.
Gerard Pique ayaa lagu tiriyaa inuu ka mid yahay ciyaartooyda ay cadaawada xoogan kala dhaxeyso kooxda Real Madrid, isagoo dhowr jeer ee uu hadlay sheegay hadalo badan oo muran xoogan dhaliyay, wuxuuna mararka qaar ku jees jeesay naadiga Los Blancos, taasoo noqotay wax iska caadi ah sida aan kaga baranay qaar ka mid ah ciyaartoyda labada dhinac.
Wargeyska “AS” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday hadalada Gerard Pique waxaana ka mid ahaa:
“Xiriir wanaagsan ayaa naga dhaxeeya qaar ka mid ah ciyaartoyda kooxda Real Madrid, waligey eray xumaan ah kama sheegin, waxana dareemayaa in dad badan ay ixtiraam iiga muujinayaan Madrid, taasina waa sababta aan si weyn ugu qiimeeyo”.
“Nacho Fernández, Lucas Vázquez iyo Sergio Ramos ma dhihi karo waxaa nahay saaxiibo aad isugu dhow, laakiin waxaan ku raaxeysanay xiriir wanaagsan”.
“Loolanka aan la galay Real Madrid, ayaa wuxuu igu riixay ilaa iyo xad in mararka qaar ay xaalada noqoto mid xad ka bax ah, balse mark aan siibo maaliyada, ma jirto wax dhibaato ah ee igaala dhaxeysa ciyaartoyda Los Blancos, horeyna ma aysan u dhicin, waxaana la leeyahay xiriir wanaagsan”.
“Shkodran Mustafi uma qalmo inuu ka ciyaaro Premier League” – Jamie Carragher
Waa tee kooxda kaliya ee aan weli la garaacin xilli ciyaareedkan shanta horyaal ee ugu waa weyn Yurub?